China Carbide Twist Drill ထုတ်လုပ်သူများနှင့်ဖြန့်ဖြူးသူများ | မင်္ဂလာဆောင်
ကျွန်ုပ်တို့၏ ၀ န်ထမ်းများသည်“ Integrity-based and Interactive Development” စိတ်ဓာတ်နှင့်“ အကောင်းဆုံးသော ၀ န်ဆောင်မှုနှင့်အတူပထမတန်းစားအရည်အသွေး” ၏သဘောတရားကိုစွဲကိုင်ထားပါသည်။ ဖောက်သည်တိုင်း၏လိုအပ်ချက်များအရဖောက်သည်များ၏ရည်မှန်းချက်များအောင်မြင်အောင်ကူညီရန်စိတ်ကြိုက်ပြင်ဆင်ထားသော & ကိုယ်ပိုင် ၀ န်ဆောင်မှုများကိုပေးသည်။ ခေါ်ဆိုရန်နှင့်မေးမြန်းရန်ပြည်တွင်းနှင့်ပြည်ပမှဖောက်သည်များကိုကြိုဆိုပါသည်။
ပိုမိုကောင်းမွန်သော ၀ န်ဆောင်မှုနှင့်တည်ငြိမ်သောအရည်အသွေးရှိသောကုန်ပစ္စည်းများအတွက်ဖောက်သည်တစ် ဦး ချင်းစီ၏လိုအပ်ချက်များကိုပြည့်မီစေရန်။ ကျွန်ုပ်တို့သည်ကမ္ဘာအနှံ့ရှိဖောက်သည်များအားကျွန်ုပ်တို့၏ဘက်စုံပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှုဖြင့်လာရောက်လည်ပတ်ရန်နှင့်စျေးကွက်အသစ်များအားအတူတကွတိုးတက်စေရန်၊ တောက်ပသောအနာဂတ်ကိုဖန်တီးရန်ကျွန်ုပ်တို့အားလှိုက်လှဲစွာကြိုဆိုပါသည်။
YG10X YL10.2 & WF25 ဂျာမနီ K44 & K40 Sandvik H10F
ကောက်ပဲသီးနှံအရွယ်အစား 0.7 μm, Co10%, Flexural အစွမ်းသတ္တိကို 3320N / mm² ကောက်ပဲသီးနှံအရွယ်အစား 0.6 μm, Co10%, Flexural အစွမ်းသတ္တိကို 4000N / mm² ကောက်ပဲသီးနှံအရွယ်အစား 0.5 μm, Co12%, Flexural အစွမ်းသတ္တိကို 4300N / mm² ကောက်ပဲသီးနှံအရွယ်အစား 0.5 μm, Co10%, Flexural အစွမ်းသတ္တိကို 3320N / mm²
ကုတ်အင်္ကျီ မာကျောHV အထူμm ပွတ်တိုက်ကိန်း ဓာတ်တိုးTemp အရောင်
AlTiN 3500 ၂.၅-၃ ၀.၃ 900 အနက်ရောင်
TiAlN 2800 ၂.၅-၃ ၀.၃ 900 ခရမ်းရောင်
TiSiN 36003၀.၄၅ 1000 ကြေး
AlTiSiN 400030.4 1200 အပြာရောင်
TiN 2500 ၂-၃ 0.5 600 ရွှေ
ပစ္စည်း Tungsten Carbide, အစိုင်အခဲ carbide, ဘိလပ်မြေ carbide
အမျိုးအစား Carbide လေ့ကျင့်ခန်း -bits
ကုတ်အင်္ကျီ AiTIN, TiAIN, TiCN, ALTiN, TiN …
Helix Angle 10. 15. 25. 35. 45 ။ ၅၅ ဒီဂရီ၊
3XD, 5XD, 8XD … 20XD … 50XD
အလူမီနီယံ၊ သံမဏိ၊ သံ၊ သံသတ္တု / သံသတ္တု / သံမဏိ / သစ်သား / PVC /
ကျွန်ုပ်တို့၏ထုတ်ကုန်များ၏စျေးကွက်ဝေစုသည်နှစ်စဉ်တိုးပွားလာခဲ့သည်။ သင်တို့သည်ငါတို့၏ထုတ်ကုန်တစ်ခုခုကိုစိတ်ဝင်စားလျှင်သို့မဟုတ်ထုံးစံအမိန့်ကိုဆွေးနွေးလိုလျှင်, ကျွန်တော်တို့ကိုဆက်သွယ်ပါရန်အခမဲ့ခံစားရသည်။ ကျွန်ုပ်တို့သည်မဝေးတော့သောအနာဂတ်တွင်ကမ္ဘာတစ်ဝှမ်းရှိဖောက်သည်အသစ်များနှင့်အောင်မြင်သောစီးပွားရေးဆက်ဆံမှုများတည်ဆောက်ရန်မျှော်လင့်နေပါသည်။ ငါတို့သည်သင်တို့၏စုံစမ်းရေးကော်မရှင်နှင့်အမိန့်မျှော်လင့်နေကြသည်။
ရှေ့သို့ Spiral Flute အဆင့်လေ့ကျင့်ခန်း, 7/8 နှင့် 1-1 / 8
နောက်တစ်ခု: Hss ဖြောင့် Shanks Twist Rolls အတု
အစိုင်အခဲ Carbide ကိုလှည့်လေ့ကျင့်
Hss ဖြောင့် Shanks Twist Rolls အတု